Maxey yihiin arrimaha keenay kacdoonka ka dhanka ah Farmaajo? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxey yihiin arrimaha keenay kacdoonka ka dhanka ah Farmaajo?
Bulshada ku nool Muqdisho, ayaa qorsheynaya in ay dhigaan bannaan-bax ka dhan ah Farmaajo, waxaana qasbaya arrimo badan oo ay ka cabanayaan.
MUQDISHO, Soomaaliya- Dibadbax ay shacabka Soomaaliyeed, ku muujinayaan dareenkooda ku aaddan, hoggaanka fashilmay, ayaa lagu wadaa in dhawaan uu ka dhaco Caasimadda dalka.
Dadka dibadbaxaya, qaarkood ayaa inala wadaagay, waxyaabaha ku qasbaya in ay ka qeyb galaan bannaan-baxaas, waxaana qoddobada ay ku dhaliilayaan Farmaajo, oo aad u fara badan ka mid ah, gabood faladii uu geystay intii uu xukunkiisa jiray iyo muddadii uu waqtigu ka dhacay.
Waxyaabaha bulshada ka careysiisay, waxaa laga xusi karaa dhiibistii C/kariin Muuse (Qalbi dhagax) uu ugu gacan galiyey Itoobiya, bishii August sanadkii 2017, waxaana xilligaas isaga iyo xukuumadiisa ay ururka gobonima doonka ee ONLF, u aqoonsadeen argagixiso.
Ikraan tahliil oo ahay gabar da'yar oo ka shaqeyneysay hay'ada sirdoonka ayaa la dilay, ehelkeeda oo la tusi waayey meydkeeda, waxa ay dilka gabadhaas ku eeddeeyeen Farmaajo iyo saxiibkiisa siyaasadda Fahad Yasiin, oo markaas ahaa taliyaha hay'ada nabad sugida.
Hooyada gabadha, oo xiriir kala duwan la sameysay Farmaajo, wuu u awooddi waayey jawaab niyada u qaboojisa, waana arrinta wal walka ugu badan ku beertay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Itoobiya oo 30-kii sano ee ugu danbeysay, fara-gallin ku heysay arrimaha Soomaaliya, ayuu xiriir gaar ah la yeeshay, iyadoo xogaha aan helayno ay sheegayaan, inuu damacsan yahay inuu u gacan galiyo dekadaha dalka qaarkood, waxaase qorshahaas hakiyey culeyska siyaasadeed ee dalkaas ka taagan, iyo dagaalka Xukuumadda Addis sanadkii la soo dhaafay kula jirtay TPLF.
Faragalin qaawan ayuu ku sameeyey maamul goboleedyada dalka, wuxuuna talada ugu sareysa saaray rag uu isagu wato, gulufkii uu u galay ka dhabeynta qorshahaasina, waxaa ku daatay dhiig fara badan, waxaana la ogaa wixii ka dhacay Baydhabo, Guriceel iyo Baladweyne oo ay weli xiisad ka taagan tahay.
Wuxuu kala dhanbalay isku duubnida maamulladii diidday, in ay u hoggaansamaan awaamiirtiisa, sida Jubaland, oo uu u kala qeybiyey Gedo iyo Kismaayo, wuxuu sidoo kale kala dhantaalay quwadii ciidankii maamulka Puntland, isagoo furin ka dhigay magaalada Boosaaso, kadib markii uu saraakiisha PSF ku qanciyey, in ay ka hor yimaadaan Deni, oo ah madaxweynaha maamulkaas.
Muddadii 5-ta sano ahayd ee uu hayey talada dalka, waxaa xirnaa inta badan wadooyinka Muqdisho, heer la gaaray in meydadka gaari-gacan lagu soo qaado, halka haweenka uurka lehna, ay dhiig bax u geeriyoodaan, kadib markii la waayey waddo uu usoo maro gadiidkii isbitalka gaarsiin lahaa.
Amniga Caasimadda ayaa sii xumaaday, muddaas, waxaana tiro beelay dilalka qorsheysan iyo qaraxyada dhacaya, wuuna ka gaabsaday ka hadalkooda, taas oo shacabka u muujisay inuusan wax dareen ah u heynin waxyeelada ay muteen.
Waxaa sidoo kale kordhaya dilalka loo geysanayo darawalada mooto bajaajta, kuwaa oo qaarkood joojiyey shaqooyinkii ay abuurteen xaalad amni awgeed, halka kuwa iminka ku shaqeeyana ay u dhabar adeegayaa howshooda, xilli ay wehel la yihin wal wal iyo walbahaar.
Dalka inuu doorasho ka qabto ayuu ku guul dareystay, Wuxuu ku dhawaaqay muddo kordhin, ay ka diiddeen qaar ka tirsan ciidamada xoogga oo la magac baxay badbaado qaran, wuxuu arrimaha doorashada iyo amniga u wakiishay Ra'iisul wasaarihiisa, kumuuse qancine, wuxuu uga daba tagay taladii uu ku wareejiyey.
Bishii December ee sanadkii tagay ayuu sameeyey mid ka mid ah ficiladii ugu xumaa ee uu ku dhaqaaqo, kadib markii uu isku dayey inuu afganbi ku qabsado xafiisyada ay xukuumadda xil gaarsiinta ku leedahay madaxtooyada, inkastoo laga hor tagay, haddana waa mid bannaanka keentay hadafkiisa ah, inuu dalka ku qabsado awood ciidan.
Arrimahaas iyo kuwa ka badan, waa waxa shacabka Muqdisho ku riixaya, in ay muujiyaan dareenkooda ku aaddan, taladii lagu aaminay Farmaajo, oo la ogyahay niyad wanaagii ay ku soo dhaweeyeen 8-dii Febraayo 2017-kii, waxaana dadka caasimadda ku nool uu hal ku dhigoodu noqday maah maahdii ahayd "Sidaan Kuugu lisay iigumada Hambeyn".